Khulanews - Page2of6- complete news
पहिलो एक दिवसीयमा नेपाल नेदरल्याण्डसँग ५५ रनले पराजित
नेपालले पहिलो एक दिवसीय खेलमा नेदरल्याण्डसँग ५५ रनले पराजित भएको छ। नेदरल्याण्डले दिएको १९० रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ४१.५ ओभरमा अलआउट हुँदै १३४ रनमा समेटिएपछि नेपालले डेब्यू खेलमै पराजय व्यहोरेको हो। राम्रा ब्याट्मेनहरू ब्याटिङ नचल्दा नेपाल पराजित हुन पुगेको हो। उत्कृष्ट सुरूवात गर्दै पहिलो विकेटका लागि उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र अनिलकुमार साहले ५८ रनको साझेदारी
जति पुरानो सहर, उति धेरै सम्पदा। जति सम्पदा, उति धेरै कथा। काठमाडौं उपत्यका सम्पदाको सहर हो। कथाको सहर हो। सहर चहार्दा ती कथा सुनिहिँड्न, बुझिराख्न पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला! ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन दरबार क्षेत्रबाट कथा हाल्न सुरु गरेको छ। तपाईं पनि अब दरबार क्षेत्र जानुभयो भने महानगरको काउन्टरबाट हेडफोन र ट्याब लिन नबिर्सनुहोला। पाटनढोका,
सुर्खेतका विद्यालयमा प्रहरीद्वारा लागुपदार्थ दुर्व्यसनीसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम
सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरको ‘भ्याली मेरसडियन एकेडेमी’ का विद्यार्थीलाई प्रहरीले लागुऔषध दुर्व्यसनसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छन्। साउन १३ गते आइबारका दिन प्रहरी निरीक्षक शंकर श्रेष्ठसहितको टोलीले ८, ९ र १० कक्षाका करिब ६० जना विद्यार्थीलाई लागुऔषध, यसका जोखिम र नियन्त्रणबारे जानकारी गराएका थिए। यो नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत विद्यालयमा गएर चेतनामूलक कक्षा सञ्चालन गर्ने अन्तर्गतको कार्यक्रम हो।
पौडेलको प्रश्न : न्यायाधीश बन्दा मान्य सर्टिफिकेट प्रधानन्यायाधीश हुनेबेला कसरी अमान्य?
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले योग्यतामा प्रश्न उठ्ने गरी प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले धावा बोलेको आरोप लगाएका पौडेलले सुनुवाइ समितिको नाममा जोशीको पदलाई धरापमा पारिएको बताए। ‘सुनुवाइ समितिले उहाँ (जोशी)लाई स्वीकार गरेको छैन। उल्टो भन्दैछन् विद्यापिठको सर्टिफिकेट भएन। उनले
जलविद्युतमा इजरायली लगानी ल्याउन आग्रह
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुन र नेपालका लागि इजरायली राजदूत बेन्नी ओमेरबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारस्थित उर्जामन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा द्धिपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको छ। उर्जामन्त्री पुनले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि स्थायित्वको युग सुरु भएको भन्दै इजरायली लगानीकर्तालाई उर्जा क्षेत्रमा लगानीको पहल गर्न राजदूत ओमेरसँग आग्रह गरे। मन्त्री पुनले भने ‘१० वर्षमा १०
उद्दारको नाममा ठग्ने हेलिकप्टर, अस्पताललाई कारबाहीको सिफारिस
नेपालमा आएका पर्यटकलाई उद्धारको नाममा अनावस्यक रकम असुली गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बद्नाम भएपछि सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले त्यस्तो कार्यमा संलग्न कम्पनी,व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सफिरिस गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले सात सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा त्यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। केही
जिम्बावेमा मुगावेबिना चुनाव हुँदै
अफ्रिकी मुलुक जिम्बावेमा आज राष्ट्रपतिका लागि मतदान हुँदैछ। सन् १९८०मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र बनेको जिम्बावेमा पहिलो पटक पूर्वराष्ट्रपति रोवर्ट मुगावे उम्मेदवार नभएको चुनाव हुन लागेको हो। गत वर्ष सैनिक कूसँगै ९३ वर्षिय मुगावेले ३० वर्षपछि राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिएका थिए। सन् १९८७ मा राष्ट्रपति बन्नुअघि उनी ७ वर्ष प्रधानमन्त्री बनेका थिए। मतदान सुरू हुनुभन्दा २४ घन्टाअघि
कसरी थेग्ला काठमाडौंले २५ वर्षअघिको मुसलधारे वर्षा?
मनसुन प्रभावले भारतका छवटा राज्यमा बाढी आउँदा आइतबार बेलुकीसम्म छ सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। प्रभावित राज्यमा सीमावर्ति पश्चिम बंगाल र उत्तरप्रदेश पनि छन्। उतैबाट आउने मनसुनले त्यत्तिकै पानी काठमाडौं उपत्यकामा खन्याइदियो भने? मौसम विभागका अनुसार मनसुन प्रभावले हाम्रो भेगको आकाश अझै दुई महिना रसिलै रहनेछ। यो अवधिमा सिमसिम पानीले आकाशको रस निख्रियो भने ठिकै
हो, मलाई फल हान्दा बढाइचढाइ गरें, अब नयाँ मान्छे बन्छु: नेयमार
ब्राजिलका स्टार स्ट्राइकर नेयमारले विश्वकपपछि आफू नयाँ मान्छे बन्न चाहेको बताएका छन्। रसिया विश्वकपमा उनको प्रदर्शन र व्यवहारलाई लिएर भएको आलोचनाको जवाफका लागि नेयमारले जिलेटको विज्ञापनलाई प्रयोग गरेका छन्। सो भिडियो विज्ञापनमा उनले रसिया विश्वकपमा आफूलाई फल हान्दा बढाइचढाइ गरेको स्वीकारेका छन् भने फेरि नयाँ मान्छे बन्न चाहेको बताएका छन्। सन् २०१८को विश्वकपमा नेयमार र
मनमोहन अस्पताल राज्यलाई बेचिदिउँ: प्रदीप ज्ञवाली (आर्काइभबाट)
यो लेख नेकपाका नेता प्रदीप ज्ञवालीले झण्डै एक वर्षअघि सेतोपाटीमा लेख्नुभएको हो। डा. गोविन्द केसीको १५औ अनशनको सम्बोधन हुन नसक्नुमा मनमोहन स्मृति अस्पतालको मुद्दा अहिले पनि एउटा प्रमुख कारण हो। जबकी केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा डा. केसीको १२ औं अनशन सम्बोधन गर्ने क्रममा मनमोहन स्मृति अस्पताल सरकारलाई बेच्ने र त्यो अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) अन्तर्गत रहेन सम्झौता भइसकेको हो। त्यो सम्झौताको